Tun Tun's Photo Diary: Mandalay Kywe Se Kan Highway Bus Station
မန္တလေးကနေ ၇န်ကုန်ကို ပြန်တော့မှာပါ။ ကျွဲဆည်ကန် ကားကွင်းမှာ ကားစီးပါတယ်။ တောင်ကြီးသွားတော့လဲ အဲ့မှာပဲ စီးရတာပါပဲ။ ကားကွင်းက မြို.နဲ. သိပ်မဝေးပါဘူး။ ရန်ကုန် အောင်မင်္ဂလာ ကားကွင်းကသာ မြို.နဲ.တော်တော်ဝေးတာ။
ဒီကားကွင်းကို နေ၇ာကျပ်လို. ပိုဝေးတဲ့ နေ၇ာကိုေ၇ွ.မယ်လို.ကြားပါတယ်။ ဘယ်တော့ ရွေ.မလဲတော့ သေချာမသိဘူး။ အမှန်တကယ်ပဲ ကျွဲဆည်ကန် ကားကွင်းက အင်မတန် ကြပ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို လမ်းပိတ်တက်ပြီး ကားကွင်းအ၀င်နားက လမ်းကလဲ ခင်းထားတာ မညီမညာနဲ.။
ဒီဓါတ်ပုံတွေက ၂၀၁၁ သြဂုတ်တုန်းကရိုက်ထားတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆို ကားတွေ ပေါများလာတော့။ ဒီလို Taxi အပြာလေးတွေ သုံးဘီးကားတွေတောင် တော်တော်လေး ၇ှားသွားပါပြီ။ နောက်ဆို၇င် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ထင်တယ်။
ကားကွင်းထဲမှာ မုန်.ဆိုင်တွေ အများကြီး ရှိတာကို ဒီလို အသည်တွေ ဘယ်လို စီးပွာရှာကြသလဲ မသိဘူး။ ကားပေါ်ကနေ မဆင်းချင်တဲ့ အပျင်းကြီးတဲ့သူတွေ ပဲ ၀ယ်ကြမယ်ထင်တယ်။း)
Buses which go to Taungyi, Kalaw, Nyaung Shwe (Inle Lake)
လမ်းဘေးမှာေ၇သန်. ပုလင်းနဲ.ေ၇ာင်းတဲ့ ဓါတ်ဆီ တွေ ဘယ်ကလာသလဲ သိချင်လား။ ဒီပုံတွေကြည့်၇င် သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ သဘောမပေါက်တဲ့သူတွေကိုလဲ ရှင်းပြဦးမယ်း)။ ဒီအန်တီကြီးတွေက စီထားတဲ့ဆီပေပါ ဗုံးတွေထဲက ဆီအကြွင်းအကျန်တွေကို တုတ်နဲ.ထိုးနေတာလေ။ တုတ်ထိပ်မှာေ၇မြုပ်/အ၀တ်စုတ် ချည်ထားပြီး အဲဒီတုတ်နဲ. ပုံးထဲ ကို ထိုးတာ။ ပြီး၇င် အ၀တ်စုတ် နဲ.ပါလာတဲ့ ဆီတွေ ကို ပလက်စတစ် ပုံးလေးထဲ ညစ်ထည့်တာ။ ပြီးရင်ေ၇သန်.ဗူးလေးနဲ.ထည့်။ Ready to sell. :)
အဲဒီဆီတွေကို သူတို. ဘာလုပ်သလဲ တော့ ကျွန်ေတာ်သေချာမသိပါဘူး။ေ၇သန်.ဗူးထဲ ထည့်လိုက်တာ မြင်မိတော့ လမ်းဘေးမှာေ၇သန်.ဗူးနဲ.ေ၇ာင်းနဲ. ဆီတွေက ဒီကနေများလာသလားလို.တွေးမိတယ်။း)
at 3/31/2014 09:31:00 PM
Anonymous July 25, 2014 at 1:22 AM
ကျွဲဆည်ကန်ကားကွင်းကိုမြို့ထဲနဲ့နီးတယ်ပြောတာ စည်ပင်ကတွေ့ရင်သွားပြီ။ :D
အိမ်ကနေဆို နာရီဝက်လောက်ဆိုင်ကယ်မောင်းရတာ နော်